दमननाथको नजरमा पद्मरत्न तुलाधर : सैद्धान्तिक विषयमा कठोर, व्यवहारमा कोमल | Ratopati
अलबिदा तुलाधर !
दमननाथको नजरमा पद्मरत्न तुलाधर : सैद्धान्तिक विषयमा कठोर, व्यवहारमा कोमल
personदमननाथ ढुङ्गाना exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक १९, २०७५ chat_bubble_outline0
पद्मरत्न तुलाधर र मलाई कतिपयले दौँतरी पनि भन्ने गर्छन् । उहाँ पनि काठमाडौँको, म पनि काठमाडौँको । उमेर पनि लगभग उस्तै । स्कुल पनि हामी दुवैको एउटै हो, पद्मोदय । त्यस बेलादेखि नै हाम्रो सामान्य चिनजान थियो । २०४६ पछि भने उहाँ र म मानव अधिकारका कारणले अलि बढी नै घनिष्ठ भयौँ ।
२०४८ सालको चुनावमा मेरो प्रतिद्वन्द्वीलाई उहाँले नै 'ब्याक' गराउनुभएको थियो । त्यसपछि त हामी झन निकट बन्यौँ । त्यो समयमा म एउटा पार्टी नेपाली काँग्रेस र उहाँ अर्को पार्टीबाट सँगै संसदमा प्रवेश गर्यौं । पछि म सभामुख भएँ । सभामुख र संसदको हैसियतमा हाम्रो सम्बन्ध हुने नै भयो । त्योभन्दा पनि, माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेपछिका घटनाक्रमले हामी साह्रै घनिष्ट भयौं ।
मैले त रोल्पामा केसम्म भनेको थिएँ भने, 'रोल्पावासी भएको भए म पनि माओवादी हुन्थेँ ।' त्यसपछि मैले पार्टी र सुरक्षा निकायहरूबाट धेरै आरोप खेप्नुपर्यो । तैपनि ‘खाओवादी बढ्यो भने माओवादी बढ्छ’ भनेर मैले ठोकुवा गरेँ । माओवादी घटाउने हो भने खाओवाद घटाउनैपर्छ भन्ने मेरो अडान रह्यो । त्यतिबेला देशव्यापी रूपमा खाओवाद भनेको भ्रष्टाचार थियो । भ्रष्टाचारीहरूले गरेको भ्रष्टाचारलाई मैले खाओवाद भनेको थिएँ । त्यो खाओवादले माओवाद बढायो भनेर मैले लक्षित गरेको थिएँ । ( प्रचण्डजीले हालै त्यो कुरा उद्धृत गर्दै दमनजीले त्यतिसम्म भन्नुभएको थियो भनेर स्मरण गर्नुभएको थियो ।)
२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि हामी दुई जना सँगसँगै रह्यौं । टिचिङ हस्पिटल नजिकैको राजाको घर निर्मल निवास अगाडिको कफ्र्यु तोड्यौँ । त्यसमा नागरिक समाजका धेरै साथीहरु पनि थिए । हामी सँगसँगै गिरफ्तार भयौं ।दुवाकोट जेलमा पनि सँगै बस्यौं ।
त्यसमा पनि दुई जना संयोजक- पद्मरत्नजी र म नै थियौं । शान्ति प्रक्रिया नभड्कियोस् र संविधान निर्माण नभड्कियोस् भनेर । उनीहरू (सबै राजनीतिक दलहरू) लाई जहिले पनि केन्द्रमा ल्याएर राख्थ्यौं । हाम्रा कुरा उनीहरु गम्भीरताका साथ सुन्थे पनि । त्यसअनुसार काम पनि गर्थे । समग्रमा भन्दा हामीले जनआन्दोलन अगाडि शान्तिपूर्ण परिवर्तनका पक्षमा जनमत बनायौं र जनआन्दोलपछि शान्ति प्रक्रियाका अपूर्ण कामलाई पूर्णता दिने काम गर्यौं ।
पदमरत्नजीको परिकल्पना हुने गथ्र्यो- राज्य भनेको सबैको साझा हुनुपर्छ, सबैलाई बराबरी व्यवहार हुनुपर्छ । संविधानमा कानुनी समानता लेखेर मात्र हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो । उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, कहाँ छ समानता ? भाषा, आस्था, व्यवहार कहाँ छ ? दलित- जनजाति दमित छन् । त्यसकारण सबै भाषा संस्कृतिको पनि उत्थान गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो पद्मरत्नजी । काठमाडौंमा नेवार समुदाय छन् । उनीहरु सबै धनी छैनन् । उनीहरुमा कोही पीडित पनि छन् । नेवारका पनि आफ्नै पीडा छन्। उनीहरु स्कुल जान्छन् तर आफ्नो भाषामा पढ्न पाउँदैनन् ।
जे जति जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृति छन्, उनीहरुको आफ्नो जुन रहनसहन छ । ती सबैको राज्यले उचित सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने पद्मरत्नजीको मान्यता हो । त्यो वास्तवमा राष्ट्र बनाउने कुरा हो । राष्ट्र भनेको के हो त ? हरेकलाई आफ्नो पहिचानलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने हो । आफ्नो पहिचान नै भएन भने के राष्ट्र ? राष्ट्रिय पहिचानले मात्रै मान्छेलाई पुग्दैन ।
पद्मरत्नजीको विशेषता हो- सिद्धान्तमा कठोर र व्यवहारमा निकै कोमल । यस्तो गुण निकै कम मानिसमा हुने गर्छ ।कोमलता र कठोरता दुबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमता पद्मरत्न तुलाधरमा थियो ।
अल बिदा साथी, अल बिदा पद्मरत्नजी !
(फणिन्द्र नेपालसँगको कुराकानीमा आधारित ।)
मन्त्री विना मगरको निर्देशनमा कञ्चनपुरमा आक्रमण गरिएको काँग्रेसको आरोप
मनाङ अन्तिम खेलमा पनि निराश
तीन दिनदेखि अस्पतालमा पानीको अभाव
झापा र मोरङमा चट्याङ लागेर २ किशोरसहित ३ जनाको मृत्यु
रेडक्रस ऐनको मस्यौदा समितिमा दास
आमाले बिहे गर्न नमानेपछि छोरीको अपहरण !
रौतहट प्रहरी भ्यान दुर्घटनाः मृतक परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति